Displaying items by tag: Tips - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Saturday, 14 December 2019 11:58
အချက်ပြကို စနစ်မှန်စွာ အသုံးပြုပါ
Signal ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရသည် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို (သို့) လူအများကို သတိပြုမိစေရန် အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အလံဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်လက် အမူအရာဖြင့် လည်းကောင်း ဖွင့်ပိတ်၊ ဝှေ့ယမ်း၊ ထူးခြားစွာ လှုပ်ရှားပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Saturday, 14 December 2019 11:26
တောင်တက်ခရီးနဲ့ မတ်စောက်တဲ့ လမ်းတွေမှာ အတက်ကားကို ဦးစားပေးပါဟူသော စာတမ်းတွေကို တွေ့ဖူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ကား အသုံးပြုသူများ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေပါ
Friday, 13 December 2019 10:04
ကားသက်တမ်းတိုးတာ ဘယ်ကားတွေ ဘယ်လောက်ကုန်လဲ
ကညနမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေးက တစ်နှစ်ကို ၁၅၀၀၀ ကျပ်ပါ။
Thursday, 12 December 2019 16:49
ကားဂီယာစနစ် ပျက်စီးနေတဲ့ လက္ခဏာများ
ကျွန်တော်တို့တွေမောင်းနေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ ဂီယာစနစ်ဟာ ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ အရေးအပါဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။
ကားအရစ်ကျ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ မာတိကာ
ကားဝယ်ယူခြင်းကို ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အရစ်ကျဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ၊ တစ်ဘဏ်နဲ့ တစ်ဘဏ်ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဘဏ်တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ Auto Loan တွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Thursday, 12 December 2019 14:23
ကားတာယာ နိုက်ထရိုဂျင် ထိုးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
သင့်ကားရဲ့တာယာကို နိုက်ထရ်ိုဂျင် ထိုးမှာလား ? ရိုးရိုးလေ ထိုးမှာလား ?
Tuesday, 10 December 2019 12:37
၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ
Monday, 09 December 2019 18:08
Remote Key ကို Push Start ပြောင်းချင်သူများ အတွက်
Monday, 09 December 2019 13:22
မိမိအမည်နဲ့ဆောင်ထားတဲ့အခွန်က မိမိနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
(Shock Absorbers & Leaf Springs)
Gold Step Co., Ltd. (Shwe Pyi Thit)